कसरी एक आईफोन ढाँचा र यसलाई बाकस बाहिर ताजा छोड्नुहोस् ग्याजेट समाचार
कसरी एक आईफोन ढाँचा र यसलाई बाकस बाहिर ताजा
जे भए पनि तपाइँको नयाँ आईफोनले कत्ति राम्रो काम गर्दछ, डरलाग्दो दिन सँधै आउँदछ: तपाइँले यसलाई ढाँचा गर्नुपर्नेछ। कि त तपाईं डाटा र फाईलहरू मेटाउन चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको मेमोरी ओगटेको छ र जुन तपाईं मूलबाट हटाउन चाहानुहुन्छ वा अप्ठ्यारो प्रणालीको स्थापनाको बखत महत्वपूर्ण त्रुटि देखा पर्‍यो वा यस्तै किसिमले, यो महत्त्वपूर्ण हो कि तपाईंलाई कसरी बोक्ने भनेर जान्नुहोस्। प्रक्रिया बाहिर। त्यसकारण, वास्तविक अलिडाड ग्याजेटमा हामी यस लेखमा तपाइँका सबै शंकाहरू समाधान गर्न चाहन्छौं, र हामी तपाइँलाई देखाउन जाँदैछौं आईफोन पुन: भण्डारण गर्न विभिन्न तरिकाहरू के छन्।
हो पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। तपाइँले थाहा पाउनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको आईफोनको बारेमा कुरा गर्दै, एप्पलले आफ्नो सुरूवातबाट आईफोनको सामग्री ढाँचा वा मेट्नेको सट्टा बहाल गर्ने शब्द प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। तसर्थ, अब देखि यी सर्तहरूसँग आफूलाई परिचित गर्नुहोस्, किनकि तपाईं उनीहरूलाई ट्युटोरियलमा धेरै अवसरहरूमा देख्नुहुनेछ। हाम्रो आईफोन ढाँचा गर्न धेरै तरिकाहरू छन्, र मुख्य भिन्नता यो छ कि हामीसँग कम्प्युटर छ, या त पीसी वा म्याक, आईट्यून्स स्थापना गरिएको छ।
1 आईट्यून्सको साथ कम्प्युटर मार्फत आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
2 उपकरणबाटै आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
3 के तपाईं स्क्रीनमा केवल एप्पल लोगो देख्नुहुन्छ?
4 मैले एउटा आईफोन भेट्टाए, के म यसलाई ढाँचा मिलाउन सक्छु?
आईट्यून्सको साथ कम्प्युटर मार्फत आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
दिमागमा राख्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको त्यो हो जब हाम्रो आईफोन पुनर्स्थापना गर्दा हामी सबै जानकारी गुमाउनेछौं, त्यो हो, फाईलहरू, फोटोहरू, भिडियोहरू र अनुप्रयोगहरू पूर्ण रूपमा गायब हुनेछन्। साधारणतया आईफोन फेला पर्दै छ कन्फिगर गर्न को लागी तयार छ क्षणमा हामीले यो जारी गर्‍यौं। त्यसकारण हामी हामी किन आफ्नो आईफोन पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौं भन्ने कारणका बारे स्पष्ट हुनुपर्दछ, र त्यसो गरे पछि पश्चाताप नगर्न आवश्यक उपायहरू लिन्छौं। पहिलो स्पष्ट छ: तपाईंको उपकरणको ब्याकअप बनाउनुहोस्, या त iTunes मा वा iCloud मा, एप्पलको क्लाउड।
कुरा मा जाने, यो विधि प्राय सबै भन्दा साधारण हो। आफूलाई फेला पारेपछि स्थितिमा हामीले आशा गरे अनुसार मोबाइलले कार्य गर्दैन, वा एक अपडेट पछि हामीले पत्ता लगायौं त्रुटि जुन हामीलाई सामान्य रूपमा प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ, सरल र सुरक्षित समाधान बहालीको माध्यमबाट हो iTunes। यो भन्न सकिन्छ कि यो, यसको शुरुआतमा, एक आईफोन पुनर्स्थापनाको लागि एक मात्र तरीका थियो, र यो त्यस्तो विधि हो जुन विशाल बहुसंख्यक मानिसहरूले त्यसो गर्न प्रयोग गर्छन्।
पहिलो चरण सुनिश्चित गर्न बाहेक अरु केहि छैन iTunes को पछिल्लो संस्करण स्थापित छ हाम्रो कम्प्युटरमा। हामी आधिकारिक USB- लाइटनिंग केबल र ओपन आईट्यून्सको साथ कम्प्युटरमा हाम्रो आईफोन जडान गर्दछौं। हामी माथिको बायाँ कुनामा आइकनको माध्यमबाट हाम्रो उपकरण प्रबन्ध गर्न पहुँच गर्छौं, र त्यहाँ हामी उपकरणको सबै आधारभूत जानकारी हेर्न सक्दछौं।
यी सबै जानकारीहरूको बीचमा, IMEI र क्रम संख्याको सम्बन्धमा जानकारीको साथ, हामी विकल्पहरू फेला पार्दछौं "अपडेटका लागि खोजी गर्नुहोस्" र "आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्"। यो बिन्दुमा महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग सबैभन्दा पछिल्लो ब्याकअप सम्भव छ भनेर प्रमाणित गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ, जुन हामीले हाम्रो मनपर्ने विधिद्वारा। पहिले नै बनेको जगेडाको साथ, हामी जानेछौं सेटिंग्स - आईक्लाउड - मेरो आईफोन खोज्नुहोस् यसलाई निष्क्रिय गर्न र यसरी सहि बहालीलाई अनुमति दिनुहोस्. यस बिन्दुमा, हामी क्लिक गर्न सक्षम हुनेछौं "आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्", त्यस क्षणमा पृष्ठभूमिमा अपरेटिंग प्रणालीको डाउनलोड सुरू हुनेछ। जसरी यसले धेरै जीबीको ठाउँ लिन्छ, यो एक प्रक्रिया हो जुन केहि मिनेटहरू लाग्दछ, डाउनलोड गर्दा आईफोन प्रयोग गर्न सक्षम हुँदै, यद्यपि यस प्रक्रियामा यसलाई छुनु हुँदैन।
एकचोटि डाउनलोड भएपछि, र १० सेकेन्ड काउन्टडाउन पछि, पुनर्स्थापना आफै पनि सुरू हुन्छ। कालो स्क्रीन, एप्पल लोगो र एक प्रगति पट्टी संग केहि तनाव मिनेट पछि, हाम्रो आईफोनले यो पहिलो पटक गरे जस्तै सुरू गर्दछ, हामीलाई यो कन्फिगरको लागि प्रतीक्षा गर्दै।
उपकरणबाटै आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
तर हामीसँग विकल्प पनि छ आईट्यून्समा जडान नगरी आईफोन पुनर्स्थापना गर्नुहोस् र, त्यसकारण कुनै पनि पीसी वा म्याकमा। यस विधि प्रयोग गर्दा हामीले लिन सक्ने मुख्य फाइदाहरू यो हो कि हामीलाई पीसी / म्याकको आवश्यकता पर्दैन, तर पनि हामी पहिले जस्तो आईओएसको उही संस्करण कायम राख्न जारी राख्नेछौं। यद्यपि धेरै व्यक्तिले यो विधि प्रयोग गरेर आईफोनलाई पुनःस्थापना गर्दा मेमोरी पूर्ण रूपमा खाली नहुन सक्छ र केही त्रुटिहरू र फोहोर यसमा, यो माथि आईट्यून्स विधि सिफारिस गर्दै, यो केहि प्रमाणित छैन।
जे होस् र यदि हामी जारी राख्न चाहन्छौं भने, हामीले ब्याकअप गरेका छौं भन्ने निश्चित गरिसकेपछि, हामी सेक्सन खोज्नेछौं "सामान्य" आईफोन सेटिंग्समा, त्यस पछि हामी मेनूलाई तल जानेछौं जबसम्म हामी "रिसेट" विकल्प फेला पार्दैनौं। यो विकल्प हो जहाँ हामी फ्याक्ट्री सेटिंग्समा हाम्रो आईफोन पुन: भण्डारण गर्न सक्छौं, तर हामीसँग केहि आंशिक सेटि settingsहरू पुनर्स्थापित गर्न अन्य विकल्पहरू छन्।
Hola: यो विकल्पले मात्र यन्त्र सेटि removeहरू हटाउँदछ, तर हाम्रो डाटा अटुट राख्दछ।
सामग्री र सेटिंग्स हटाउनुहोस्: यसले आईफोनमा सबै डाटा र सेटि eraहरू मेटाउनेछ। यो आइट्यून्सबाट हाम्रो उपकरण पुनर्स्थापना गर्न वैकल्पिक हो।
नेटवर्क सेटिंग्स रिसेट गर्नुहोस्: यसले मोबाइल नेटवर्कहरू, ब्लुटुथ र वाइफाइ सम्बन्धी हाम्रो सबै सेटि eraहरू मेटाउनेछ, हामीले सुरक्षित गरेका सम्भावित वाइफाइ नेटवर्कहरू बिर्सदै। दिमागमा राख्नुहोस् कि यस विधिले आईक्लाउड किचेनमा भण्डार भएका पासवर्डहरूलाई असर गर्न सक्छ।
के तपाईं स्क्रीनमा केवल एप्पल लोगो देख्नुहुन्छ?
हो, यो पनि हुन सक्दछ: पुनर्स्थापना पछि केवल स्क्रिनमा तपाईले देख्नुहुने मात्र आईट्यून्स लोगो होजसरी हामी माथिको छविमा देख्छौं। यो अवस्था मा हामी केवल हाम्रो आईफोन फेरि प्रयोग गर्न सक्दछौं यदि हामी यसलाई आइट्यून्स मार्फत पुनर्स्थापना गर्छौं। यो गर्नका लागि हामीले यस ट्यूटोरियलको पहिलो खण्डको चरणहरू मात्र पालना गर्नुपर्नेछ, तर यसको बाबजुद हामीले आईओएस उपकरणलाई DFU मोड प्रवेश गर्न जबरजस्ती गर्नुहोस् वा पुनःप्राप्ति मोड आईट्यून्सबाट यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुन र बहालीमा जानुहोस् जुन आईट्यून्सले पत्ता लगाउँदछ र यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्षम हुन्छ।
हुनसक्छ कि DFU मोड तपाईलाई चिनियाँ जस्तो लाग्दछ, र यो सत्य हो कि यसको प्रक्रिया केही अनौंठो छ, तर शान्त छ किनकि यो घर लेख्न केहि पनि छैन। हामीले भर्खर आईफोनलाई पीसी वा म्याकमा USB - लाइटनिंग केबल मार्फत जडान गर्नुपर्दछ र हामीले पावर बटनले उही कार्यमा उही समयमा होम बटन थिच्नुहोस् (भोल्यूम - र आईफोन7र त्यसका लागि पावर) समयमा पाँच सेकेन्ड। तब हामी केवल होम वा भोल्यूम बटन होल्ड गर्नेछौं -। त्यतिबेला यदि हामीले सही तरिकाले गरेका छौं भने आईट्यून्स लोगो एक केबलको साथ देखा पर्दछ जुन हामीले पीसी वा म्याकमा आईफोन toणी छ भनेर दर्शाउँछ iTunes खोल्दै। यो सजिलो प्रक्रिया वा केहि चीज होइन जुन हामी प्रत्येक दिन गर्छौं, त्यसैले यसको ह्या get प्राप्त गर्न गाह्रो छ, तर चिन्ता नलिनुहोस् किनकि धेरै प्रयत्न पछि तपाईं अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ।
आईट्यून्सले हामीलाई प्रदान गर्ने विकल्पहरूले यस समयमा रिकभरी मोडमा यसले हाम्रो आईफोन पत्ता लगाउँदछ अपडेट र पुनर्स्थापना बाहेक अरु केहि पनि हुँदैन, जहाँ स्पष्टतः हामी पुनर्स्थापना गर्न छनौट गर्नेछौं स्क्र्याचबाट अपरेटिंग प्रणाली पुन: स्थापना गर्न। दुर्भाग्यवस, आईफोनको साथ DFU मोडमा हामी तपाईंको डाटा पहुँच गर्न सक्षम हुनेछैनौं, त्यसोभए हामीले ती सबैलाई बिदाइ दिन पर्छ, तर यो एक मात्र तरीका हो जुन हामीले आफ्नो आईफोन बचत गर्न सक्दछौं। यसैले हामी बारम्बार प्रतिलिपि बनाउन सिफारिस गर्दछौं।
छिटो र सजिलो उत्तर त्यो हो si, मार्फत यी विधिहरू मध्ये कुनै पनि कि हामी तपाईंलाई सिकाइएको छ तपाईं एक आईफोन ढाँचा गर्न सक्नुहुन्छ। पूरा उत्तर: यसले तपाईंलाई कुनै राम्रो गर्दैन। IOS7को रिलीज पछि, सबै आईओएस उपकरणहरू तिनीहरूको मालिकको एप्पल आईडीमा लिंक छन्, एक पटक उपकरण पुनर्स्थापना भएपछि, कन्फिगरेसन प्रक्रिया सुरू गर्दा, आईफोनले एप्पल आईडी र पासवर्ड जस्ता प्रयोगकर्ताको डेटा अनुरोध गर्दछ यो एक समान व्यक्ति हो भनेर निश्चित गर्न, त्यसैले यदि तपाईं यसको वैध प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न भने, यो केवल पेपरवेटको रूपमा काम गर्दछ। त्यसोभए चतुर कुरा गर्नु भनेको यदि तपाईले आईफोन पाउनुभयो भने सिरीलाई सोध्नुहोस् "यो आईफोन कसको हो?" यसको मालिकको सम्पर्क विवरणहरू प्राप्त गर्न, र यदि यो असम्भव छ भने, पुलिस डेलिभरी यहाँ जानुहोस् र यसको प्रयोगकर्तालाई अवस्थित गर्नुहोस्। जब तपाई आफ्नो हराएको आईफोन फेला पार्नुहुन्छ तब तपाई अचम्मित हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » कसरी एक आईफोन ढाँचा र यसलाई बाकस बाहिर ताजा
मसँग आईप्याड ट्याब्लेट छ, र यो मेरो लागि एकदम ढिलो छ। के यो कारखानाबाट पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ?
Saturio लाई जवाफ दिनुहोस्
जोस रुबियो भन्यो
अवश्य! विधि आईफोन र आईप्याड दुबैको लागि समान छ। यदि तपाईले याद गर्नुभयो कि यो पहिले नै एकदम ढिलो छ भने तपाई ट्यूटोरियलको पहिलो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, पक्कै पनि तपाईको डेटा जगेडा प्रतिलिपिमा बचत गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
जोस रुबियोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको कम्प्युटरमा WhatsApp को उपयोग कसरी गर्ने